Alahady fetin’ny ray, alahadin’ny Vokovoko manga – FJKM Ambavahadimitafo Alahady fetin’ny ray, alahadin’ny Vokovoko manga |
Publié le 19 juin 2022 à 09:06
Alahady 19 jona 2022, ankalazana ny fatin’ny ray, alahadin’ny sampana Vokovoko Manga manerana ny FJKM, mbola hibanjinana ny lohahevitra hoe « Mampanjaka ny fahefany ny Tompo ».
Ny mpitandrina miza-draharaha Randriambinintsoa Onja no nitondra ny hafatr’Andriamanitra avy ao amin’ny Apokalipsy 12:7-12 » 7Ary nisy ady tany an-danitra: Mikaela sy ny anjeliny niady tamin’ilay dragona; ary ilay dragona mbamin’ny anjeliny kosa dia niady, 8nefa tsy naharesy, sady tsy nisy fitoerana ho azy intsony tany an-danitra. 9Ary nazera ilay dragona, dia ilay menarana ela, izay atao hoe devoly sy Satana, izay mamitaka izao tontolo izao; dia nazera tamin’ny tany izy, ary ny anjeliny koa niaraka nazera taminy. 10Dia nahare feo mahery tany an-danitra aho nanao hoe: Ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan’Andriamanitsika, Ary ny fahefan’ny Kristiny, Satria nazera ilay mpiampanga ny rahalahintsika, dia ilay miampanga azy eo anatrehan’Andriamanitsika andro aman’alina. 11Ary izy ireo naharesy azy noho ny amin’ny ran’ny Zanak’ondry Sy ny teny filazana Azy, Ary tsy nankamamy ny ainy intsony iry, na dia ho faty aza. 12Ary noho izany mifalia, ry lanitra sy ianareo izay monina ao aminy. Loza ho an’ny tany sy ny ranomasina ! Fa nidina ho aminareo ny devoly sady manana fahatezerana lehibe, Satria fantany fa kely sisa ny androny. «
Andeha hiombona amin’izany fanompoam-pivavahana izany isika :